Hezahina ampitomboina ny foto-drafitr’asa eo anivon’ny Sekoly ambony momba ny Hay Famokarana na ESSA AGRO ety Ankatso. Nambara izany nandritra ny fankalazana ny faha-55 taona niorenan’ity sekoly ity tamin’ny 23 marsa lasa teo.
Marina fa voafetra ho 100 ihany mantsy ny isan’ny mpianatra raisin’ity sekoly ity. Kanefa miisa 1.600 ka hatramin’ny 2.500 ny mpifaninana hiditra ho taona voalohany isan-taona. Noho izany dia hampitomboina ho 1000 ny salanisan’ny mpianatra horaisina. Izany no vina nentin’ny solotenan’ny minisiteran’ny Fambolena sy Fiompiana, Bebe Razaiarimanana, tale jeneralin’ny « Administration, de la programmation du budget ».
Manana tanjona tratrarina ihany koa ny ESSA AGRO mandritra ny 10 taona manaraka. Raha ny voalazan’i Pr Bruno Ramamonjisoa, talen’ny sekoly ESSA AGRO, dia tafiditra amin’izany ny fanatsarana ny kalitaon’ny fampianarana. Ny zava-kendrena dia mba ifanaraka amin’ny tsenan’ny asa ny fari-pahaizan’ny mpianatra. Tafiditra amin’izany koa ny fanatsarana ny fitantanana ary ny fijerena ny tsy fahampian’ny enti-manana rehetra. Miandrandra ny fiaraha-miasa akaiky amin’ny governemanta indianina sy sinoa izy ireo mba hahafahany manantanteraka izany vinavina rehetra izany. Nisy mantsy ny fafimpiresahana tao aorianan’ny fandalovan’ny Filoha indianina teto amintsika, Ram Nath Kovin ny 15 marsa lasa teo. Hezahina araka izany ny fampidirina mpampianatra mpikaroka vaovao 20 hampiofana ireo injenieran’ny fambolena.
Mampiofona mpianatra mahay tokoa ny ESSA Agro. Nandrombaka ny amboara tamin’ny fifaninanana « Ma thèse en 180 secondes » i Andriamanantena Mahery, doctorant eo amin’ny ESSA Agro. Hisolo tena an’i Madagasikara ho amin’ny dingana famaranana iraisam-pirenena any Lausanne Suisse izy amin’ny volana septambra. Ireo loko azo amin’ny alalan’ny zava-maniry eto Madagasikara no ifantohana fikarohana ataony.